Ku-simaha Wakiilka Joogtada ah ee Shiinaha u fadhiya Qaramada Midoobay …
Yao Shaojun, Wakiilka Joogtada ah ee Shacabka Jamhuuriyadda Shiinaha u fadhiya Qaramada Midoobay, ayaa ka hadlay xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo doorashooyinka soo socda ee bilowga sanadka 2021.
Wuxuu ku booriyay dhammaan Soomaalida inay ka shaqeeyaan doorashada dalka oo muhiim u ah isbadalka cusub ee uu dalku wajihi doono, iyo baahida loo qabo midnimo iyo iskaashi.
Yao Shaojun wuxuu intaas ku daray in dowladda Shiinaha ay marwalba amaaneyso doorka muhiimka ah ee doorashada Soomaaliya, wadahadal iyo iskaashi dhexmara Soomaalida dhexdooda.
Ka miro dhalinta Doorashada oo indhaha lagu wada hayo ayuu shaaciyay in laga doonayo Xukuumadda haatan talada heysa, maadaama sharciga Doorashooyinka la mariyay Hay’adaha fulinta, xeer dajinta iyo Madaxweynaha oo ugu dambeyn saxiixay.
Shiinaha ayaa intaa ku daray inay taageerayaan Soomaaliya ayna siinayaan taageerada ay u baahan yihiin, sidaa darteed ay lagama maarmaan tahay in la gaaro himilo fog oo loogu talagalay in Soomaaliya ka soo kabsato dagaal daba dheeraaday.
“Beesha Caalamku waa inay ku bixisaa kaalmo wax ku ool ah oo ku saleysan ixtiraamka hoggaanka geeddi-socodka siyaasadeed ee Soomaaliya, doorashooyinka iyo in wax walba lagu dhammeystiray isfahamka Qaaf, iyo sidoo kale taageerada looga baahan yahay Midowga Afrika inay oggolaansho ka hesho UN qayb ka mid ah dalka.” ayuu yiri ku simaha Wakiilka Joogtada ah ee Shiinaha u fadhiya Qaramada Midoobay.
Xigasho: Masrawy / Axadle